Maashaa Allah Rabbiin Warra Ramadaana kana keessa Milkawee nuha godhuuRamadaanni dhumuuf guyyuma 4 qofaatu hafe.Wanti dhufu marti deemuun isaa waan hin oolle. Umriin keenyaas akkanumatti deemaa jira. Guyyaan dhufee dabru marti umrii keenya irraa hir’isaa dabra. Ramadaanni dhihoo Kana hawwiin eegaa turre kuno har’a nu dhiisee deemaa jira. Waggaa dhufu Ramadaanaan walitti deebi’uu keenya rabbumaatu beeka. Rabbiin Ramadaana baranaa nurraa qeebalee umrii nu dheeressee waggaa dhufus warra Ramadaanaan walitti deebi’u nu haa taasisu! – Site Title
Posted byabdiaminbakar 6th May 2021 Posted inUncategorized
Maashaa Allah Rabbiin Warra Ramadaana kana keessa Milkawee nuha godhuu
#Ramadaanni dhumuuf guyyuma 4 qofaatu hafe.
Wanti dhufu marti deemuun isaa waan hin oolle. Umriin keenyaas akkanumatti deemaa jira. Guyyaan dhufee dabru marti umrii keenya irraa hir’isaa dabra. Ramadaanni dhihoo Kana hawwiin eegaa turre kuno har’a nu dhiisee deemaa jira. Waggaa dhufu Ramadaanaan walitti deebi’uu keenya rabbumaatu beeka. Rabbiin Ramadaana baranaa nurraa qeebalee umrii nu dheeressee waggaa dhufus warra Ramadaanaan walitti deebi’u nu haa taasisu!
Haga addunyaarra jiraattan Dhukkubsattanii siree mana yaalaa mudachuu, Rakkattanii Rakkinaan fuula namaa dhaabbachuu Rabbi isinirraa haa qabu !!